Miconazole - Iray amin'ireo vahaolana lehibe hiadiana amin'ny areti-mifindra | Bezzia
Ny antsoina hoe Miconazole dia fanafody Izy io dia aseho mba hitsaboana aretina sasany vokatry ny holatra. Anisan'izy ireo isika afaka miresaka momba ny tongotr'ireo atleta sy ny hodiny, ankoatry ny hafa. Izy io koa dia aseho ho an'ny aretin'ny fivaviana vokatry ny holatra Candida.
Araka ny hitantsika dia iray amin'ireo fitsipika tsara indrindra ho an'ity karazana olana ity izy. ny nitrona miconazole Fantatra fa antifungal, izay no ampiasaina amin'ny areti-mifindra noresahintsika. Androany dia lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny zava-mahadomelina toy izao. Aza miala amin'ny fisalasalana !.
1 Ahoana ny fampiasana Miconazole
2 Fitandremana tokony hodinihina
3 Inona no ilana an'i Miconazole?
4 Vidiny Miconazole
Ahoana ny fampiasana Miconazole
Ny fomba fahita mahazatra mahita an'io karazana fanafody io dia amin'ny crème. Na dia azonao atao aza ny mahita azy na amin'ny endrika ranony sy vovoka ary izy rehetra, mba hosorana amin'ny hoditra. Tsy maharary koa ny mahafantatra fa azo ampiasaina izy ireo aretina fivaviana. Mazava ho azy, ny dokoteranao dia tsy maintsy manome ny kinova izay mifanaraka indrindra amin'ny olanao manokana.
Ny fahita indrindra amin'ity fitsaboana ity dia ny fampiasana azy indroa isan'andro ary mandritra ny 27 andro hanasitranana ny tongotr'ireo atleta. Mazava ho azy fa izay aretina hafa mahazo anao amin'ny hoditra dia tokony ho ampy ny fampiharana mandritra ny tapa-bolana. Rehefa mampihatra azy io dia tsy maintsy hametraka vola amin'ny faritra voakasik'izany isika. Faritra iray izay hadio sy ho maina mialoha. Miconazole tokony hosorana maivana amin'ny hoditra mandra-poka azy. Aza adino ny manasa ny tananao na aloha na aorian'ny fampiharana.
Raha fivaviana ny aretina dia tsy maintsy apetrakao amin'ny alàlan'ny vitsivitsy ny fanafody mpangataka azo ampiasaina, aleo alohan'ny hatory. Amin'ity tranga ity, ny mahazatra dia ny mampiasa crème 5 g. Fa mazava ho azy, ny dokoteranao na ny mpitsabo aretim-behivavy foana no hanome anao ny vola ilaina, ary koa ny andro manaraka.
Toy ny fanafody rehetra, ny fitandremana andiany tsy maintsy alaina alohan'ny sy mandritra ny faharetan'ny fitsaboana. ENY tsy mahazaka karazana fanafody ianao, izao no fotoana hilazana amin'ny dokotera na amin'ny farmasinao. Toy izany koa, raha efa mihinana fanafody hafa ianao na angamba vitamina sasany dia tokony hanome hevitra momba izany koa ianao. Tsy manadino ireo vehivavy mety bevohoka na mampinono. Ilaina hatrany ny mifanakalo hevitra momba izany amin'ny dokoteranao alohan'ny hanombohana fitsaboana toy izao.
Mazava ho azy, ny fitandremana iray hafa tokony horaisina miaraka amin'i Miconazole dia misy ifandraisany amin'ny fomba fanabeazana aizana. Satria io karazana crème io dia mety tsy mifanaraka amin'ny lateksan'ny fimailo, ohatra. Noho izany notoroana hevitra ny tsy hanao firaisana ara-nofo raha maharitra ny fitsaboana.
Inona no ilana an'i Miconazole?
Tongan'ny atleta: Ny antsoina hoe tongan'ny atleta dia aretina izay misy fiantraikany amin'ireo vala izay azontsika ao amin'ny hoditra tongotra. Avy amin'ny sisin'ny mitovy amin'ilay faritra amin'ny zavamaniry. Toa fahita amin'ny atleta izy io ary noho izany ny anarany. Ny faritra mando, izay isian'ny holatra, dia matetika no faritra faran'izay mahazatra amin'ny areti-mifindra.
Dermatophytosis: Miconazole koa dia ampiasaina amin'ny antsoina hoe Dermatophytosis. Na dia maro aza no mahalala azy ho ringworm. Io dia ny holatra no nibahana faritra ambonin ny hoditra. Mety hisy fiatraikany amin'ny hoho na hodi-doha koa izy ireo.
candidiasis: Io ilay Aretina holatra Candida misy fiatraikany amin'ny fivaviana. Na dia tsy dia matetika loatra aza dia afaka mipoitra ao anaty ilay izy. Tokony holazaina ihany koa fa ny Candidiasis dia mety hisy fiantraikany amin'ny lehilahy amin'ny faritra toy ny glans.
Araka ny hitantsika, dia fanafody natao hiadiana amin'ny aretina isan-karazany, ny ankamaroan'ny dia vokatry ny holatra. Na dia marina aza fa azo omena ho an'ny hafa olan'ny hoditra na bakteria.
Raha momba ny fividianana azy io na ny fahazoana manome azy io dia hitantsika ny fiovan'ny anarana. Izany no antony tsy maintsy hiresahantsika momba ireo anarana varotra toa ny Gynecological Daktarin izay mitentina 3,61 euro. Krema 40 g miaraka amin'ny mpangataka. Mandritra izany fotoana izany, ny Daktarin Cream 2%Izy io koa dia tonga ao anaty kaontenera 40 g ary mitentina 3.36 euro. Mazava ho azy, raha tadiavinao amin'ny vovoka dia hanana vidiny 2,89 euro izy saingy tokony ho fantatrao fa 20 g fotsiny izany. Anarana iray hafa izay hahitanao an'i Miconazole dia Fungisdin Aerosol. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny tavoahangy iray mitondra 125 ml ary manana vidiny 4,68 euro isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Miconazole
Bernardo Urrutia López dia hoy izy:
Roa herinandro lasa izay dia navoakako ilay sombin-nify farany hahafahana miasa ao am-poko, saingy hita fa avy aiza no nalaina ilay nify, dia marary kely amin'ny hantsana nify aho.
Izaho dia manana DAKTARIN ORAL GEL (MICONAZOLE 20 mg / g) izay nomen'izy ireo ahy taona maro lasa izay fa navoakany daholo ny nifiko, manontany aho izao raha azoko ampiharina io vokatra io sa TSY.-
Ankasitrahako ny valiny raha vantany vao afaka.-
Valiny tamin'i Bernardo Urrutia López
Rehefa misy aretina na mihinana fanafody hafa isika dia tsara foana ny manontany ny dokotera mialoha. Satria fantatsika tsara, dia afaka manelingelina izy ireo. Noho io antony io dia tsy afaka manome valiny mazava kokoa aminao aho, satria tsy manana fampahalalana bebe kokoa momba ny aretinao. Koa satria ny fitsaboana ambaranao dia mifanohitra amin'ny fanafody hafa.
Ahoana no manapaka ny paosiko
Fikarakarana fanampiny ny volo maina